काठमाडौं । तपाईका काम वा आनीबानीले अरुलाई आत्महत्या गर्ने मनस्थितिमा धकेलेको छैन ? अथवा तपाईका गतिविधिले यस्तो काममा कसैलाई दरुत्साहन (कानुनी वा नैतिक दृष्टिले अवैध कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नु वा उक्साउनु) पो गरेको छ कि ? त्यसो हो भने, सचेत हुनुहोस् है ।
आन्तरिक कलह र त्यसबाट उत्पन्न आवेश आत्महत्याको कारण भएको पछिल्लो प्रहरी अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकबाट ।